Torolàlana ho an'ny mpampiasa Apple | Vaovao IPhone
Torolàlana ho an'ny mpampiasa Apple
Luis Padilla | | Fitaovana IPhone, Apple Watch
Ny Noely dia fotoana mety indrindra hahazoana ireo kojakoja rehetra tadiavinao hatry ny ela fa tsy sahinao novidiana. Ny fanoratana taratasy ho an'ny Magy Telo na Dadabe Noely dia mety tena ilaina amin'izao vanim-potoana izao mba hanitarana ny fanangonana tadiny ho an'ny Apple Watch, toby famahanana ho an'ny iPhone sy iPad na tranga manokana ho an'ny iPhone. Ireto misy hevitra vitsivitsy mety tsara omena ny namanao na ny fianakavianao, na ho anao manokana mihitsy aza, ary eo ihany koa ny vidiny rehetra.
1 Tranga ho an'ny iPhone-nao
3 Tady ho an'ny Apple Watch
Tranga ho an'ny iPhone-nao
Fiarovana, famolavolana, hateviny farany ambany, hitondrana carte de crédit ... tsy tambo isaina ireo safidy misy hividianana tranga ho an'ny iPhone. Ireto no tianay kokoa.
Spigen dia mitovy dika amin'ny kalitao amin'ny vidiny mihoatra ny azo ekena. Manana rakotra isan-karazany izy io, ny sasany fiarovana amin'ny porofo baomba azo antoka, ary ny hafa tsy dia miharihary loatra nefa tsy mahafoy tena tsara amin'ny fanoherana ivelany. Ny tranga tiako indrindra dia ilay maodely «Liquid Crystal». mangarahara tanteraka, malefaka ary miaro tanteraka, eny fa na dia ny sisiny aza. Mamela anao hisehoseho ny endrika sy ny volon'ny iPhone tsy ilaozanao miaro amin'ny gorodona sy ny latsaka, ary misy vidiny manaitaitra azy, € 6,99 fotsiny ao Amazon. Azo alaina amin'ny maodely iPhone isan-karazany sy amin'ny famaranana isan-karazany.
RhinoShield dia marika iray hafa izay miantoka fiarovana lehibe indrindra ho an'ny iPhone, ary dIzy io dia misy mpitaingin-tsoavaly sasany izay tsy manapotika loatra ny volavolan-tsarobidinao dia manome fiarovana lehibe indrindra amin'ny fianjerana, araka ny asehonay anao amin'izany lahatsoratra. Ireo dia mpiaro izay manarona ny mombamomba ny fitaovana fotsiny, mamoaka tanteraka ny eo aloha sy ny ao aoriana, ahafahanao mankafy ny lokon'ilay fitaovana. Ary koa satria miavaka izy ireo dia tsy hisy ny olana amin'ny fametrahana azy amin'ny faritra rehetra raha tsy manadio ny Jet Black ianao. Hita amina modely sy loko isan-karazany ao Amazon amin'ny € 24,99 ihany.
Fiampangana fototra HiRise 2 avy amin'ny South South dia mitazona ny fahaizan'ny modely tany am-boalohany fa manatsara ny fitaovana, miaraka amin'ny famaranana miolakolaka bebe kokoa izay mitovy kokoa amin'ny maodely iPhone ankehitriny, ary mamela azy hampiasaina amin'ny maodelin'ny iPad rehetra hatramin'ny 9,7 santimetatra ary miaraka amin'ny Siri Remote anao. Hita ao amin'ny Amazon amin'ny € 47,44. Izahay dia nanao ny famerenana tamin'ny Ity lahatsoratra ity.
TimePorter dia seranan-tsambo tsy mitombina ho an'ny Apple Watch, nanomboka Tsy mamela anao hameno ny batterie fotsiny izy io fa afaka mitondra koa ny charger, ny tariby mametaka ary ny tadiny sasany ao anatiny. Mety ny manao dia lavitra, fanomezana tonga lafatra ho an'ireo manana ny fiambenan'i Apple. Hita ao amin'ny Amazon amin'ny € 54,99 amin'ny loko mainty sy fotsy. Raha te hahafantatra misimisy kokoa ianao, dia ao ny Ity lahatsoratra ity.
Tianao fotsiny toby fiampangana ho an'ny Apple Watch, izay mora vidy ary mifanentana amin'ny maody fahazavana alina ihany koa? Avy eo ny fanomezana tonga lafatrao dia ity base Spigen ity, izay manaparitaka ny kojakoja rehetra. Azo ampiharina, tsotra ary mora vidy, azonao ampiasaina amin'ny Amazon amin'ny € 15,99.
Ho an'ireo manana fitaovana marobe ao an-trano ary tsy mahalala izay hametrahana azy ireo amin'ny alina, Avantree dia manome antsika vahaolana tonga lafatra. Fototra famahanana mifanaraka amin'ny fitaovana rehetra, satria apetrakao ny tariby, ary ankoatra ny fahafahana mandoa hatramin'ny efatra miaraka manampy anao handamina ny zava-drehetra ka amin'ny toerana iray dia apetrakao tsara daholo ny zava-drehetra. Ny vidiny dia tsara ihany koa, 34,99 € fotsiny ao Amazon.
Tady ho an'ny Apple Watch
Ny tadiny ho an'ny Apple Watch dia bontolo madio, ary na dia manana maodely maromaro aza i Apple, dia avo tokoa ny vidin'izy ireo. Betsaka ny marika mivarotra kopian'ny tady tany am-boalohany, saingy MoKo dia iray amin'ireo orinasa manome fahatokisana lehibe indrindra amin'ny vokatra izay, na dia mety tsy hahatratra ny haavon'ny kalitao tahaka ny an'ny voalohany aza izy ireo, mahafeno ambaratonga antonony. ary koa amin'ny vidiny ambany kokoa. Ity no tranga misy ny fehikibo Milanese izay misy amin'ny loko isan-karazany sy ho an'ny haben'ny Apple Watch, misy amin'ny Amazon amin'ny € 15,99 ihany.
Raha aleonao ny tadim-panatanjahantena dia tsy mila mandeha lavitra koa ianao, satria ilay marika ihany Manolotra anao fehin-kofehy silipo maro loko amin'ny loko rehetra azonao eritreretina i MoKo, na dia ny sasany aza nohombohana, ary ho an'ny famantaranandro roa. Aza kivy manova isan'andro ny tadiny amin'ny € 9,99 in fotsiny Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Torolàlana ho an'ny mpampiasa Apple
Ny AirPods dia mandalo ny fitsapana fitetezana voalohany sy ny fanoherana ny rano?
Space Marshals 2 tsy misy afa-tsy amin'ny 0,99 euro ihany